Chii chinonzi Kukura Kupaza? Heano gumi nemashanu Matekiniki | Martech Zone
izwi kugura kazhinji ine chirevo chisina kunaka chakabatana nacho sezvo ichireva kuchirongwa. Asi kunyangwe vanhu vanokanganisa zvirongwa havasi kugara vachiita chimwe chinhu chisiri pamutemo kana kukuvadza. Kubiridzira dzimwe nguva kunoshanda kana nzira pfupi. Kuisa pfungwa imwechete kushambadziro inoshanda futi. Ndizvozvo kukura kugura.
Kukura kwekubira kwakatanga kushandiswa kune startups avo vaida kuvaka ruzivo nekutora… asi vasina bhajeti rekushambadzira kana zviwanikwa zvekuzviita. Sean Ellis akanyora izwi iri pa blog rake muna 2010 mune imwe posvo inonzi Tsvaga Yekukura Hacker yeYako Kutanga kwaakaona Growth Hacker seimwe nzira yekuhaya yechinyakare, yakazara-nguva mushambadzi.
Kukura kwekubira kwakamboonekwa sekutsiva kwechinyakare, nzira yekutengesa kwenguva yakareba nemaitiro epfupi-kwenguva akatarisana nekukurumidza kukura uye mari. Kwemakore gumi apfuura, zvakadaro, kukura kwekubiridzira mabhenefiti kwakaonekwa nekambani yega yega uye inogamuchirwa nemakambani makuru pamwe neatanga madiki.
Chinyakare kushambadzira pamhepo uye kunze kwenyika kunogona kutyaira kusinganzwisisike kukura kumakambani, uye iwo marongero kazhinji anowedzera kukura kwekambani zvishoma nezvishoma nekufamba kwenguva. Nekudaro, pane nzira dzekusvetuka kana kubhiza kushambadzira kwako kuburikidza nemaitiro asiri echinyakare.
Kunyange ini ndisingafarire izwi racho kugura, yakakamira sezwi rakaenda zvakanyanya (uye kazhinji rinonyanya kushandiswa). Mune mawonero angu, zvakaenzana nzira dzekushambadzira dzinofanirwa kushandisa ese echinyakare, marefu-marefu marongero uye kukura kwekupaza nzira zvinobudirira.
Chii chinonzi Tsanangudzo Yekukura Kubiridzira?
Kukura kwekubira inzira yekutengesa iyo inoshandisa zvese zvisikwa uye zvisingaenzaniswi nzira yekuwana kuwanda kwakawanda kune zvigadzirwa zvako kana sevhisi pasina kushandisa mari yakawanda. Izwi iri rakashandiswa kune tekinoroji kutanga avo vaishaya bhajeti rekushambadzira, asi vanogona kushandisa zvine hungwaru injini dzekutsvaga, kushambadzira munharaunda, analytics, uye kuyedza kukurumidza kugadzirisa uye kukura kwavo pamhepo.
Kukura Kubiridzira Maitiro uye Matekiniki
Eliv8 yakagadzira iyi yakanaka infographic pamwe neunganidzwa yavo 15 Yakanakisa Kukura Kubiridzira Matekiniki & Pfungwa:
Tinya mune yechitatu Party Vateereri - Guest blogging inotaurwa, asi podcasting inzira yakanaka yekupinda mune vamwe vateereri. Isu tinowanzo kukoka vanokurudzira muindasitiri yedu pane yedu podcast kuti vatariswe nevateereri vavo.
Revera 3rd Party Mapuratifomu - Iri izano rakanaka. Tine runyorwa rukuru rwe nzvimbo dzepamhepo ku account kana kusimudzira zvigadzirwa zvako pano.
Target Vako Vakwikwidzi 'Fans - Zvese zvakabhadharwa uye zvakasikwa magariro maturusi aripo ekuziva vateveri vevanokwikwidza. Kana iwe uchigona kuvabatsira, wadii kubatana navo? Kana iwe uchikwanisa kukunda vakwikwidzi vako uye nekubatsira vatengi vavo… vangangotungamira nzira yako.
Gadzira Zvemukati Zve Wako Rwendo rwevatengi - Pindura mibvunzo iyo vatengi vari kutsvaga online.
Gadzira Peji Rakananga Zvemukati - Isu tinoshandisa zvine simba kushambadzira izvo zvakanangwa zvichibva pachikamu chechinyorwa, zvichipa yakakodzera kufona-kune-chiito kune vaverengi.
Gadzira Rondedzero Yakatarwa yeemaemail - Sarudza vatengi vako kubva pane zvaunotarisira uye uvadzidzise pane zvigadzirwa nemasevhisi.
Sarudza Chiitiko - Chii chaunogona kuwedzera kumapeji ako akafanirwa nemushanyi kana akapatsanurwa kwavari? Ivo vatove mutengi here? Vari kudzoka here? Vari kudzvanya pane yekuendesa chinongedzo? Kana iwe uchikwanisa kushandura ruzivo zvichienderana nekuti ndivanaani, unogona kutyaira zvirinani shanduko chiitiko.
Cart Kurega Kuzivisa - Iyi ingori zano rakakura iro rese ecommerce chikuva rinofanirwa kuve naro. Ndiwo mukana wekutevera mumwe munhu kuti ashandure aine mamwe mamiriro akatenderedza kutengeserana kana kunyange kupihwa.
Makwikwi Emitambo - Tiri kuvhura mimwe makwikwi munguva pfupi iri kutevera Hellowave, chikuva chakasimba chine makwikwi akaratidzirwa, ane tembere anomhanya pane yako saiti nenzvimbo dzemagariro.
Vaka Nharaunda Yakasarudzika - Uyu anotora basa, asi kana uchikwanisa chinja vateereri vako kuita nharaunda, iwe une yakanakisa bhizinesi rekuvandudza vashandi mari inogona kutenga. PS: Izvi zvakaoma chaizvo, hazvo!
Kukura kunotungamira otomatiki - Isu tanga tichiita yekurera uye otomatiki kune edu vatengi vachishandisa Wishpond - mhinduro isingadhuri - uye kuwana mhedzisiro inoshamisa.
Kugovana Kugoverana uye Kuendesa - Vanhu vanowanzoita chimwe chinhu kana shamwari ikavaudza. Kana iwe uine chikuva nhasi, iwe unofanirwa kunge uine chakadzamirwa chirongwa chekusimudzira nacho.
Kudzorerazve Ads - Dzorera vashanyi kuwebsite yako nezviziviso zvinovatevera. Kudzokororazve kunogona kuwedzera kutsvagiswa kwemuchina kusvika pa1,000% uye kushanya ne720% mushure memasvondo mana.
Shandisa Yako Dhata - 50% emabhizimusi anoona zvichinetsa kupa kushambadzira kumhedzisiro yemari. Kushandisa data uye analytics ichavandudza yako ROI.
Ita Zvinhu Zvisingakwire - Ramba uchifunga mikana uye shanda nesimba kuti uone mamwe marongero ekukura.
Ini ndichawedzera yangu yeangu yekukura yekugura nzira pano…
kushandisa Semrush, Ndinoona mapeji anowanikwa nesaiti yangu pakati pechigumi uye chegumi, ndinoona mapeji emakwikwi, ndinyorezve uye ndigadzirise iro peji neruzivo rwakawanda, mifananidzo iri nani, mamwe manhamba… uye ndorinyorazve sezvitsva. Kana ini ndikaita basa rakakura reizvozvo uye ndikadzokororazve iro peji, ini ndinowanzo riwona richionekwa zvakanyanya uye nematanho epamusoro sevanhu vanogovana uye vachireva kwazviri.
Kukura Kubiridzira Zviwanikwa
Kune zvimwe zvekuwedzera zviwanikwa pamhepo, zvinosanganisira Eliv8, Reddit, GrowthHackers, Uye Kukura Kupaza Gwaro.
Tags: kukurudzirangoro kusiiwamakwikwiDataemail chidimbukukura kugurakukura kubira mazanokukura kugura maitiromushanyi kugoverahellowavePersonalizationzvokusumwakudzokera shuremibayirosocial media yakanangwayakanangwa email zvinyorwazvakanangwa zvinyorwaUchapupuchii chiri kukura kubiridzira
Sep 29, 2016 pa 3: 11 AM
Ndakaverenga chinyorwa chako, ichi chinyorwa chinonakidza kwazvo nezve kubiridzira kwekukura. ini ndatevera zvese sekutaura kwako mune yako chinyorwa. iyi yese mienzaniso yakanakira kukura kwekuba. Ndatenda